China Sea ikhukhamba Peptide ifektri kanye nabaphakeli | I-Huayan
I-Sea cucumber peptide iyi-molecule peptide encane, ikhishwa kukhukhamba wasolwandle omusha noma omisiwe ngobuchwepheshe obucokonyisiwe bokugaywa kwe-bio-enzyme. Ngokuyinhloko ama-collagen peptides futhi anephunga elikhethekile le-fishy. Ngaphezu kwalokho, ikhukhamba yasolwandle iqukethe nama-glycopeptides namanye ama-peptide asebenzayo. Izithako ziqukethe i-calcium esebenzayo, i-monopoly-saccharide, i-peptide, ikhukhamba lolwandle i-saponin nama-amino acid. Uma kuqhathaniswa nekhukhamba lasolwandle, ikhukhamba yasolwandle i-polypeptide inezinto ezinhle ze-physicochemical njengokuncibilika, ukuzinza kanye ne-viscosity ephansi. Ngakho-ke, i-enzymatic hydrolysis yolwandle ikhukhamba i-peptide inokutholakala okuphezulu kunemikhiqizo ejwayelekile yekhukhamba yasolwandle. Isetshenziswa kabanzi emikhiqizweni yokudla neyokunakekelwa kwempilo.
Umthombo Wokuqukethwe: ukhwathu omusha noma ukhwathu wemvelo omisiwe
Umbala: Khanyisa powder ophuzi noma onsundu
Iphunga: Iphunga elikhethekile le-fishy
Isisindo Yamamolekhula: 500-1000Dal
Amaprotheni: ≥ 80%
Isithako sokudla okunempilo: sea cucumber monopoly-saccharide, polypeptide, 18amino acid, sea cucumber toxin, taurine, sea cucumber glycoside njll.
Ikhukhamba lasolwandle liqukethe ama-glycopeptides namanye ama-peptide asebenzayo, i-molecule encane i-poly-peptide inezinto eziningi, inezakhiwo ezinhle ze-physicochemical njengokuncibilika, ukuzinza kanye ne-viscosity encane. Kungukudla okufanele kweziguli ezinesifo sikashukela, umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo kanye ne-cerebral thrombosis.
Iphakheji: 10KG / Bag, 1bag / ibhokisi, noma ngezifiso
Yilwa nokukhathala, gcina isikhumba sibushelelezi futhi sinwebeka, ukubambezela ukuguga komzimba.
2 Thuthukisa ukuzivikela komzimba;
Ukwehlisa ushukela wegazi, ukwazisa izinso negazi elinomsoco.
Umthamo wokukhiqiza oqhubekayo, yokusungula okunengqondo, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo eyanele.
4.Provide esigcwele emva-sales services.
5.Qala esiQhingini saseHainan esinempilo, khetha izithako ezinempilo bese ukhonza umhlaba.
Langaphambilini I-Pea Peptide
Olandelayo: I-Peptide Yesoya